Error C# application with Database — MYSTERY ZILLION
Error C# application with Database
June 2016 in Database
Microsoft windows application တစ်ခုကို C# language နှင့် ရေးသားထားပြီး .mdf SQL extension file ဖြင့် Data များ store လုပ်ထားပါသည်။ SQL Data .mdf file ကို windows7တင်ထားသော computer တွင် သိမ်းထားပြီး နောက်ထပ် computer(windows 7) တစ်လုံးမှ လှမ်းချိပ်ပါသည်။ စုစုပေါင်း computer ၂လုံး ချိပ်၍ အလုပ်လုပ်သည်။ ၂လုံး စလုံး Ping Test ok သည်။ သို့သော် Application run သောအခါ A network-related or instance-specific error occurred while establishingaconnection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL server is configured to allow remote connections. ဆိုသော error ပေါနေပါသည်။ Computer ၂လုံး စလုံး Standard office software ပဲရှိသည်။ Client Computer/Data file computer တွေမှာ software တွေတင်ဖို့လိုပါသလဲ။ Download links တွေပါ ရေးပေးပါ။ ကျေးဇူးနော် bro တို့ sis တို့
June 2016 Administrators
port တွေကော ဖွင့်ထားရဲ့လား ?
June 2016 Registered Users
SQL Server DB ကို Remote Access လုပ်ဖို့အတွက် မူလ pc ရဲ့ SQL Server မှာ configuration လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။မူလ pc ရဲ့ SQL Server Managment Studio ကိုဖွင့်ပြီး login ၀င်ပါ။ ဘယ်ဘက်ထောင့်အပေါ်ဆုံးက DB ပုံလေးနဲ့ server\_ instance name ပေါ်မှာ Right click >> Properties ကိုနှိပ်ပါ။ Connections ကိုနှိပ်ပြီး Allow remote connections to this serverကို အမှန်ခြစ်ပြီး Save လုပ်ပါ။ SQL Server configuration manager ကိုဖွင့်ပြီး TCP/IP ကို Enabled လုပ်ပါ။ TCP Port ကို 1433 ထည့်ပေးပါ။
Firewall ခန off ထားပါ။ Firewall သုံးချင်တယ်ဆိုရင် TCP Port ကို ဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားရင် နောက် pc တလုံးကနေ မူလ pc sql serverရဲ့ Servername , instance name , username and password တို့ကိုမှန်ကန်စွာထည့်ဖို့လိုပါတယ်။
June 2016 edited June 2016 Registered Users
Thanks ပါဗျာ ဒါဆို Data file save ထားတဲ့ Host Computer မှာ SQL Server install လုပ်ထားရမှာပေါ့နော် Client Computer မှာကော ဘာတွေများလိုသေးလဲခင်ဗျာ? SQL Server 2008 offline installation package ဘယ် link မှာ Download ရပါသလဲခင်ဗျာ? Thanks ပါ @saturngod @99poison
ကျွန်တော့ mdf Data file ကို SQL Server 2008 Management Studio နှင့် ချိပ် တော့ The Database cannot be opened because it is version 851. This server supports version 655 and earlier ဆိုတဲ့ Error ပြနေလို့ ဘယ် SQL Server Version သုံးရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးပါနော်
SQL Server version မတူလို့ပါ။ version 851 က SQL Server 2016 ဖြစ်ပါတယ်။ version 655 က SQL Server 2008 ဖြစ်ပါတယ်။ Database version က SQL 2016 ဖြစ်ပြီး ချိတ်မယ့် SQL management studio က 2008 ဖြစ်နေလို့ပါ။ SQL server 2016 latest version ကို upgrade လုပ်ပြီးချိတ်ရင် အဆင်ပြေသွားပါ့မယ်။